JA Solar inopa magetsi egirinhi kuMitambo iri kuuya muBeijing
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » JA Solar inopa magetsi egirinhi kuMitambo iri kuuya muBeijing
Semutsigiri wekuvandudzwa kwegirinhi, JA Solar yakabatana nechikwata ichipa magetsi egirinhi kumitambo iri kuuya muBeijing. Inowanikwa muZhangjiakou, Hebei Province, iyo Guyuan 200MW yekuchengeta mhuka uye solar yekubatanidza purojekiti ichapa simba rakasvibira rechiitiko chemutambo unokosha neese JA Solar's high-efficiency monocrystalline modules. Chirongwa ichi chichapa avhareji ye430 miriyoni kWh magetsi pagore, zvakaenzana nekuderedza kushandiswa kwemarasha nematani 129,000 uye carbon dioxide emissions ne300,000 matani.
Kuburikidza nemusanganiswa wekupfuya mhuka nekugadzira magetsi ePV, chirongwa ichi, chakanyatso kuenderana nemamiriro ekunze ane huswa hwakadzikama muGuyuan, inopa chikafu chakaringana chezvipfuyo uku ichigadzira magetsi akawanda, nekudaro kushandisa zviwanikwa zvevhu nemazvo kuwana mabhenefiti ekukunda-kuhwina kune ese ari maviri. hupfumi uye zvakatipoteredza.
Semutyairi wehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji muindasitiri yePV, JA Solar yakazvipira kusimudzira kubatanidzwa kwekugadzira, kudzidzisa nekutsvaga. MuZhangjiakou, guta rinosangana nemitambo, makwikwi e3rd Solar Decathlon China (SDC) achangobva kuitwa sezvakarongwa. Inotsigirwa neJA Solar, uye yakagadzirwa nezvikwata zveSolarArk 3.0 neXJTU +, dzimba dzinochengetedza eco-dzimba dzine solar system dzakavakwa zvinobudirira. Aya eco-dzimba, akaiswa neJA Solar DeepBlue 3.0 high-efficiency modules uye yakanangana ne "stainable development, smart interconnection, uye hutano hwevanhu," ndeyemuenzaniso mukusimudzira uye kushandiswa kwe photovoltaics.
Chiitiko chinotarisirwa zvikuru muBeijing, chinotarisirwa kunyorwa munhoroondo mumamiriro ekusarerekera kwekabhoni pasi rose, apo kekutanga munhoroondo yayo yemakore zana, nzvimbo dzese dzichave 100% dzakafukidzwa nesimba rakasvibira.
Sokutaura kunoita chirevo chokuti: “Mvura yakachena namakomo matema akanaka semakomo endarama nesirivha.” Nzvimbo yekugara iri nani ndiyo yatinoshuvira uye nekutora mitambo muBeijing semukana, JA Solar inotarisira kushanda nevatengi vekare uye vatsva kuitira kuparadzira pfungwa yepasi rose-yakaderera kabhoni uye girinhi kusimudzira uye kukurudzira kuvakwa kwe. a Zero Carbon Society.